Chingwa Bhasiketi, Chikafu Bhasiketi, Yakapetwa Basket - Prolink
Iyo imwe nyanzvi yekumisikidza nekutengesa kunze kambani, izvo zvigadzirwa zvikuru maheti, raincoat, mabhegi, maapuroni uye zvipo zvekusimudzira. Zvese zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope neAmerica, uye nepasi rese.
Zvichakadaro, kambani yedu ine timu yehunyanzvi, inoramba ichiedza kutsvaga nekuvandudza zvigadzirwa zvitsva, kusimbisa nekuvandudza iyo inogadzira maitiro uye manejimendi system.
Tine nyanzvi timu yeinjiniya yekushandira iyo yega yega yakadzama zvido. Yemahara sampuli inogona kutumirwa iwe iwe pachako kuti uzive kure zvakanyanya chokwadi.
Hebei Prolink Kunze & Export Kutengesa Co, Ltd.
010001: corduroy cap, embroidery cap, 6 mapani chivharo ...
6602: inorema brashi yekotoni cap, yakapoteredzwa cap
884: jira rakarukwa
694: kapu yechando, cap yekusimudzira
677: gumbeze rebvudzi repolar, gumbeze rekusimudzira
524: Cotton Cap, 5 pani chivharo, promotional cap
366: chivharo chekotoni, 6 mapaneru cap, fashoni cap
211: inoshambadzira jeans cap
647: polar dehwe inodziya sikafu
467: Magorovhosi Akarukwa
020011: 6 mapaneru ebaseball caps
Hebei Prolink Kunze & Export Kutengesa Co, Ltd. iri muShijiazhuang Guta, Hebei Province. Iyo imwe nyanzvi yekumisikidza nekutengesa kunze kambani, izvo zvigadzirwa zvikuru maheti, raincoat, mabhegi, maapuroni uye zvipo zvekusimudzira. Zvese zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope neAmerica, uye nepasi rese.
Yedu bhizinesi uzivi basa rehunyanzvi, rakaisvonaka chigadzirwa mhando, yakakwikwidza mutengo uye kubata nguva yekuendesa, kuhwina vatengi kuvimba uye kushandira pamwe. Zvichakadaro, kambani yedu ine timu yehunyanzvi, inoramba ichiedza kutsvaga nekuvandudza zvigadzirwa zvitsva, kusimbisa nekuvandudza iyo inogadzira maitiro uye manejimendi system.
Nekuenderera mberi kunowedzera uye kukwidziridzwa uye hunyanzvi hwezvigadzirwa zvedu, zvakare kuvandudzwa kwehunhu hwebasa, uye kuwedzera kwesimba redu rekupa, zvinoita kuti tive nevatengi nemisika.
Kupinda 128th China Import uye Expo ...
Kambani yedu irikuenda ku128 China Kunze uye Export Fair, panguva yekuratidzira, kunze kwekuratidzira ini
Hebei prolink imupota uye ekisipoti wokutengesera co.ltd.always kuisa unhu pakutanga. kubva ...
Hebei Prolink imupota & Export Trading Co., Ltd.akagara vaiona chigadzirwa kukura uye u ...